“ကျန်းမာရေးအတွက် အရက် နဲ့ အုန်းသီး(အုန်းရည်) အသုံးဝင်ပုံ´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Facebook » “ကျန်းမာရေးအတွက် အရက် နဲ့ အုန်းသီး(အုန်းရည်) အသုံးဝင်ပုံ´´	22
“ကျန်းမာရေးအတွက် အရက် နဲ့ အုန်းသီး(အုန်းရည်) အသုံးဝင်ပုံ´´
Posted by ခင်ခ on May 15, 2013 in Facebook, Food, Drink & Recipes, Health & Fitness | 22 comments
အရည်သောက်ခြင်းတွေပါဘဲ တစ်ခုက အရက်သောက်ခြင်း နဲ့ နောက်တစ်ခုက အုန်းရည်သောက်ခြင်းပါ။
အတော်များများ ယေဘူယျပြောကြတယ် အရက်သောက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းဘူး ဘာညာ ပေါ့၊ အခုဖတ်ရတဲ့ သတင်းဆောင်းပါးမှာတော့ အရက်ရဲ့ ကောင်းကျိုးကို သုတေသီတွေက တွေ့ရှိချက်လေး တင်ပြထားတာပါ၊ အဲလိုဘဲ အုန်းသီးစား အုန်းရည်သောက်ရင် အပူကန်မယ် ဘာမယ်လို့ ထင်ကာပြောသူတွေ လည်း ရှိဖူးလို့ တကယ်တော့ အုန်းသီး၊ အုန်းရည်ဟာ ဘယ်လောက်အကျိုးများသလဲ သိစေချင်လို့ ဖေ့ဘုတ် ထဲက သိရတဲ့ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အရက်သောက်ခြင်းက ရေဒီယိုဓာတ် အဆိပ်သင့်မှု ပျောက်ကင်းစေ
တကယ့် ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ဆေးပညာ တွေ့ရှိချက် ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ် လည်း ရေဒီယိုဓာတ် ရောင်ခြည်အဆိပ်သင့်မှုကို အရက်က ကာကလည်း ကာကွယ်ပေးသလို ပျောက်လည်းပျောက်ကင်းစေတယ် လို့ အမေရိကန် ဆေးပညာရှင်များက ၂၀၀၈ ခုနှစ်က တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အရက်ရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ အယ်ကိုဟော ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ ဘီယာ၊ ဝိုင်၊ အရက်၊ ဗော့ကာ အစရှိသဖြင့် အမျိုးအစားအားလုံးက အထောက် အကူ ပြုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ယူကရိန်က နျူကလိယ စက်ရုံ ပေါက်ကွဲမှုမှ ရရှိတဲ့ သင်ခန်းစာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဝိုင်နီ သောက်ထားတဲ့ သူများက အဆိပ်သင့်မှု လျော့နည်းပြီး အချို့ ဆို လုံးဝကို အဆိပ်မသင့်ကို အံ့သြစွာ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဆေးပညာအရ ဒီလို ဖြစ်ပါတယ်။
ရေဒီယိုဓာတ်ရောင်ခြည် ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ထိုးဖောက်ဝင်ပြီဆိုရင် ဆဲလ်တွေ ကို သေစေပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ DNA တွေကို ပုံစံပြောင်း ပျက်ဆီး စေပါ တယ်။ ရောဂါလက္ခဏာ အနေနဲ့ကတော့ မအီမသာ ဖြစ်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ဝန်းလျှော်ခြင်း တို့က ၂၄ နာရီအတွင်း ဖြစ်ပြီး ကင်ဆာ အစရှိတဲ့ ရောဂါများ က နောက်ဆက် တွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုးရွားဆုံးကတော့ သေစေတဲ့ အထိ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို အရက် (အယ်လ်ကိုဟော) က ကယ်နိုင်ပါ တယ်။
အထက်ပါ ဓာတုအဆိပ်သင့်တဲ့အခါ ဆဲလ်တွေ ပျက်ဆီးဖို့ စပါတယ်။ ယင်း ပျက်ဆီးဖို့၊ ကွဲပြားဖို့ ဖြစ်လာတော့မယ် ဆဲလ်တွေကို ပုံမှန်အတိုင်း စုစည်းနေအောင်၊ ရေဒီယိုဓာတ်ကို ဖယ်ရှားနိုင်အောင် သွေးဆဲလ် တွင်း မော်လီကျူးတစ်မျိုးက အလုပ်လုပ် ပါတယ်။ ယင်း မော်လီကျူးကို သာမန်အခြေအနေမှာ ထုတ်လုပ်ဖို့ မလွယ်ကူပါတယ်။ တွန်းအားပေးဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ယင်း မော်လီကျူးကို အယ်လ်ကိုဟောက ပါရှိ တဲ့ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်များက တွန်းအားပေး အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။ အကျိုးဆက်ကတော့ အရက်သောက်ထားရင် ဓာတုရောင်ခြည်၊ ရေဒီ ယိုရောင်ခြည် အဆိပ်သင့်ဖို့ ခဲယဉ်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အရက်သောက်ထားသူဟာ နျူကလိယစက်ရုံ ပေါက်ကွဲတဲ့၊ ပျက်ဆီးတဲ့ ဒေသမှာ အသက်ရှင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူတယ် လို့ တွေ့ရှိ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
( Ref: Medic-Facts – International news for myanmar )
အုန်းသီးလေးရဲ့ လျို့ ဝှက်ချက်
တကယ်လို့ များ သင်ဟာ ပင်လယ်ကမ်းခြေကိုရောက်ဖူးသူဆိုလျှင် အုန်းသီးစိမ်းထဲက အုန်းရည်ကို သောက်ခဲ့ဖူးမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေမရောက်ဖြစ်တောင် မိမိတို့ နေထိုင်တဲ့မြို့ ရှိ ဆိုင်တွေမှာအုန်းရည်ကို သောက်သုံးလို့ရပါသေးတယ်။အုန်းရည်ဟာ ချိုမြမြ ရှရှတ အရသာရှိတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသါကြပေမဲ့ အုန်းရည်ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ လျှို့ ဝှက်ချက်ကိုလေးကိုတော့ လူသိနည်းမယ်ထင်ပါတယ်။ အုန်းသီးတလုံးထဲမှာသဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အုန်းရည် အကြောင်းနဲ့ အတူ အုန်းသီးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံလေးကို ဖတ်မိထားသလောက် ပြန်လည်ဝေမျှပါဦးမယ်ဗျာ။
အုန်းသီးလေးရဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်အုန်းသီးဟာ လူတွေအတွက် ကောင်းမွန်ထူးခြားတဲ့ အစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အထူးခြားဆုံးက လူ့ အသက်ကိုတောင် ကယ်တင်နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ အသီးဖြစ်ပါတယ်။အုန်းသီးဟာ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ခြင်း၊ကိုလက်စထရောကို လျှော့ချပေးနိုင်ခြင်း၊ ရေဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်း ပေးနိုင်ခြင်း နဲ့ အရေးပေါ်သွေးရေကြည်သွင်းဖိုလိုအပ်နေသူများကိုတောင်မှ အုန်းရည်ဖြင့် အစားသွင်း ကုသပေးနိုင်ခြင်း စတဲ့ အုန်းသီးရဲ့ အရေးပါ အသုံးဝင်ပုံကို သိရှိသူမှာ လူနည်းစုလောက်သာရှိပါတယ်။ ခေတ်ပေါ် ဆေးသုတေသနပြုသူများကလည်း အုန်းသီးဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အကျိုးပြုနိုင်သော
အုန်းသီးထဲမှ အုန်းရည်ဟာ လူ့ အသက်ကို ကယ်တင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပုံ နဲ့ ပက်သက်ပြီး အကောင်းဆုံးသက်သေတစ်ခု ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ပစိဖိတ်ဒေသ စစ်ပွဲတွေမှာ စစ်သားတွေအများအပြားဒဏ်ရာရကြတဲ့ အခါအရေးပေါ်သွေးသွင်းဖို့ လိုအပ်နေပေ မဲ့ စစ်မြေပြင် ဖြစ်နေတာကြောင့် သွေးရည်ကြည်ပုလင်းတွေကို အချိန်မှီရရှိဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာ ဆရာဝန်တွေက အုန်းသီးနုနုထဲက သန့် စင်တဲ့ အုန်းရည်ကို သွေးရည်ကြည်အစား ထိုးသွင်းကုသပြီး အသက်ကယ်ခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။အုန်းရည်ဟာလူခန္ဓာကိုယ် ရှိ သွေးရည်ကြည်နဲ့ထပ်တူနီးပါးတူညီပြီး သွေးအမျိုး အစားအားလုံးနဲ့သင့်တော်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
၃။အရေပြားတွန့် ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း
၉။အာဟာရဓာတ်နှင့် အောက်ဆီဂျင်ကို ဆဲလ်များအတွင်း ပို့ ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်း
၁၂။မှတ်ဥာဏ်ချို့ ယွင်းမှုကို ကာကွယ်ပေးခြင်း
စတဲ့ အကျိုးဆက်များစွာကို ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက်အဖိုးတန်တဲ့ အုန်းသီးဖြစ်ပါတယ်။ အုန်းသီးအနုတွင် သန့် စင်ကောင်းမွန်သော မပြည့်ဝဆီများ ပါဝင်တဲ့ အတွက် အုန်းသီးအရင့်ထက်စာရင် အဆီပါဝင်မှု နှုန်း နည်းပါတယ်။ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် စဉ်းစားပြီး အုန်းသီးတစ်လုံးကို ၀ယ်ယူတော့ မယ် ဆိုရင် အုန်းသီးအနုကို ရှာဖွေဝယ်ယူသင့်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အုန်းသီး အနုအရင့်ရွေးချယ်ပုံမှာ အုန်းသီး အနုသည်ခပ်စိမ်းစိမ်းအရောင်ရှိပြီး အုန်းသီးအရင့်မှာ အစိမ်းရောင် နည်းပါးပြီး အညိုခပ်ဖျော့ဖျော့ အရောင် ရှိတတ်ပါတယ်။
အုန်းသီးကနေ ရရှိတဲ့ အုန်းဆီကလည်း အလွန်အကျိုးများတဲ့ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းအဖြစ်သုံးစွဲနိုင်ပါသေး
တယ်။ အုန်းဆီဟာ အားလုံး သိကြတဲ့အတိုင်း ဆံပင်သန်စွမ်းနက်မှောင်ဖို့ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ သဘာသ
အားဖြည့်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။အုန်းဆီဖြင့် ဦးခေါင်းကို မှန်မှန် နှိပ်နယ်ပေးပါက ဦးရေပြားတွင် ဖြစ်တတ်သော
ဘောက်နှင့် ဦးရေပြားခြောက်သွေ့ ခြင်းတို့ ကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ် အသုံးဝင်သော အချက်မှာ
အုန်းဆီသည် သွားပိုးစားခြင်း၊သွားရောဂါဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အုန်းဆီအနည်းငယ်ကို သွားဖုံးနှင့် သွားတို့ တွင် အမြဲတမ်းပွတ်တိုက်ပေးပါက သွားများကို ပိုမိုခိုင်မာစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။အုန်းဆီရဲ့ အခြားအသုံးဝင်ပုံမှာ ခြောက်သွေ့ သောအရေပြားများအတွက် အကောင်းဆုံး moisturizer ဖြစ်ပါတယ်။အုန်းဆီကို အရေပြား ပေါ်တွင်လိမ်းပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါက အသားပတ်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ ခြင်း၊အက်ကွဲခြင်းများ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားတွန့် ခြင်းကိုလည်း နှောင့်နှေးစေ တယ်လို့သိရပါတယ်။ အုန်းဆီပါဝင်တဲ့ အရေပြားစောင့်ရှောက်ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ ဆပ်ပြာ၊အသားလှဆေး၊ လိမ်းဆေးကရင်မ် စသဖြင့်အများအပြားကို ထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။ ထိခိုက်ရှနာများအတွက်လည်း အုန်းဆီဟာ ဆေးဝါးတစ်လက်အဖြစ် အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ဒဏ်ရာ ပေါ်မှာအုန်းဆီကို လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ပြင်ပမှ ဖုန်များ၊ဘက်တီးရီးယားများနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်များ မ၀င်ရောက်နိုင်အောင် အလွှာပါးလေးအဖြစ် ဖုံးအုပ်ထား စေပါတယ်။ အုန်းဆီဟာ ဒဏ်ရာပေါ်မှ ပျက်စီးသွားသော တစ်ရှုးများကို အမြန်ဆုံးပြန်လည်ကောင်းမွန် စေကြောင်း သိရပါတယ်။
အုန်းသီးကနေ ထုတ်လုပ်တဲ့ အုန်းနို့ ၊အုန်းမှုန့် ၊ အုန်းသီးဖတ် စသည်တို့ ကိုလည်း အစားအသောက်များ ၊ မုန့် များ၊ဟင်းလျာများ ချက်ပြုတ်ရာတွင် အသုံးပြုကြပါတယ်။အချို့ သော နိုင်ငံများတွင် အုန်းနို့ မှာ ဟင်းလျာများ ချက်ပြုတ်ရာတွင်မပါမပြီးအသုံးပြုကြတဲ့ အရသာထူးကဲ ကောင်းမွန်စေသောဟင်းချက်ဖွယ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဟင်းချက်ရာတွင် အသုံးပြုမှုနည်းပါး သော်လည်း မြန်မာမုန့် တော်တော်များများမှာ အုန်းနို့ ပါဝင်တတ်ပါတယ်။ အုန်းရည်မှာ ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူများစွာဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း အုန်းနို့ နှင့်ပြုလုပ်သောအစားအသောက်များကို အလွန်အကျွံစားသုံးပါက သွေးတိုးရောဂါသမားများအတွက် အလွန် အန္တာရယ်ကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အုန်းရည်များများသောက်ပြီးအုန်းဆီများများလိမ်းလို့အုန်းနို့ ကိုတော့ သင့်တင့်ရုံသာ စားကြပါစို့ နော်။
( Ref: သတင်းစုံလင်ဖေ့ဘုတ်တခွင် )
ခင် ခ has written 454 post in this Website..
View all posts by ခင်ခ →	Blog
weiwei says: အုန်းသီးကြိုက်လို့ ၀င်အားပေးသွားပါတယ် … အုန်းသီးတစ်လုံးလုံးကို ဘယ်လိုလုပ်လုပ် အကုန်ကြိုက်တယ် .. ကြောင်လေး ခွေးလေးတွေ နေမကောင်းဖြစ်နေတာတွေ့ရင် အုန်းသီးဖတ်ကျွေးလိုက်လို့ လူကြီးတွေပြောတာ မှတ်မိနေပါသေးတယ် ..
ခင်ခ says: ကနဦးမန့်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်သလို ကြောင်လေးတွေအတွက် အုန်းသီးကျွေးပြီး ခွေးလေးတွေအတွက် ထန်းလျှက်ခဲ ကျွေးတာပိုသင့်လျှော်ပါတယ် မဝေရေ။
နေလို့မကောင်းတဲ့အခါ ကြောင်ရဲ့ခန္ဓာတည်ဆောက်မှု့က အအေးကြောက်ပြီး အပူလိုလို့ အုန်းသီးကျွေးစေတာဖြစ်ပြီး၊ ခွေးရဲ့ခန္ဓာတည်ဆောက်မှု့က အပူပိုကဲလို့ ထန်းလျှက် ကျွေးကာ ခန္ဓာအတွင်း အပူကိုထိန်းစေတာပါ။
သဘာဝတရားကိုလေ့လာကြည့်ရင် ကြောင်တွေဟာ နေပူစာလှုံနေတတ်ကြပြီး ခွေးတွေဟာ အရိပ်အောက်မှာ ပိုနေချင်တတ်ကြပါတယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8419
ဆူး says: အုန်းသီး စားပြိး လည်ချောင်းနာတတ်တယ်။
သူများတွေက အုန်းသီး စားပြီး သွေးတိုးတယ်တဲ့.. ဆူး က သွေးမတိုးခင် အုန်းသီးစားပြီး လည်ချောင်းနာတဲ့ ဝေဒနာ ခံစားရတာပဲ..
တခြား အပူစာတွေ ဆိုလည်း မစားဘူး..
သရက်သီးဆိုလည်း အရသာ ခံယုံ ၁စိတ် ၂စိတ်လောက်ပဲ..
ဒူးရင်းသီး ဆိုရင် အခုနောက်ပိုင်း လုံးဝ ကို မစားတော့တာ.. စားပြီးရင် ပူတဲ့ ခံစားချက် ကို မခံစားနိုင်လွန်းလို့..
ခင်ခ says: မမဆူးရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာဟာ အနွေးဓာတ်ပိုတဲ့သဘောရှိပုံရပါတယ်။
ကိုယ်တွင်းအပူငြိမ်းစေတဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ်နှင့် ဖော်စပ်ထားသော အပူငြိမ်းဆေးမျိုး စားပေးရင် အဆင်ပြေနိုင်မယ်ထင်ပါကြောင်း အကြံပြုပါရစေဗျ။
Myo Thant says: ( အကျိုးဆက်ကတော့ အရက်သောက်ထားရင် ဓာတုရောင်ခြည်၊ ရေဒီ ယိုရောင်ခြည် အဆိပ်သင့်ဖို့ ခဲယဉ်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အရက်သောက်ထားသူဟာ နျူကလိယစက်ရုံ ပေါက်ကွဲတဲ့၊ ပျက်ဆီးတဲ့ ဒေသမှာ အသက်ရှင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူတယ် လို့ တွေ့ရှိ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ )
တယ်ဟုတ်ပါလားကွယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင်ခ says: အခု သုတေသီတွေကတော့ အဲလိုဆိုတာဘဲ ကိုမျိုးသန့်ရေ။
မောင် ပေ says: ဒီကနေ့ က စပြီး အုန်းရည် သောက်တော့မယ် လေးခရေ
ထန်းလျက်ခဲလေး နဲ့ မှ ပို လန်း မယ် ထင်ပါရဲ့ 
ဆူး says: အုန်းသီး အစိမ်း တလုံး ကို ခူး.. အရည် ကို သောက်..
အတွင်းက ဂလိုင်ပေါက်ထဲ ကို မီးရှုးမီးပန်း ဗျောက်အိုး ယမ်းမီးခြစ်ခေါင်း စုပြုံထည့်.. အုန်းသီးဗုံးလည်း လုပ်ပြီး ကြောင်ကြီး နဲ့ ကြေးမှုံ ကို တယောက် တခု လက်ဆောင်ပေးရင် ကောင်းမလားလို့.. ဦးတဲ့ သူဆီက အရင်ပေါက်စေ.. (မှတ်ချက် ဗျောက်အိုး ယမ်းမီးခြစ်ခေါင်း အစား အားပြင်း လျှက်ဆား လို့ တွေးစေချင်ကြောင်း)
kyeemite says: အရက်နဲ့အုန်း
အရက်ပါလို့ အားပေးသွားပါတယ်ခီညာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင်ခ says: ဆရာပေပြောသလို ထန်းလျှက်ခဲ နဲ့ အုန်းရည် သောက်ကြည့်အုံးမှဘဲဗျာ။
မမဆူးရဲ့ အကြံပေးချက်ကတော့ ပြောင်မြောက်ပါပေါ့ကွယ်။
ကိုကြီးမိုက်ရေ အရက်အကျိုးဘဲတင်ရင် အမျိုးသမီးထုက ပြောမှာစိုးလို့ အရက် နဲ့ အုန်းရည် တွဲတင်လိုက်တာလေ။ ကမ်းခြေများရောက်ရင် ကိုယ်က အရက်လေးသောက် သူကို အုန်းရည်တိုက် မဟုတ်ပေဘူးလားဗျ။
MaMa says: မှတ်မှတ်ရရ နာဂစ်မှာတုန်းက ပင်လယ်ပိုင်းက အသိတစ်ယောက်ကြုံခဲ့ရတာလေး ပြောချင်တယ်။
နာဂစ်ဖြစ်ပြီးတော့ သောက်စရာ ရေလည်း မရှိ၊ စားစရာလည်း မရှိတဲ့အချိန်မှာ……
ရေထဲမျောလာတဲ့ အုန်းသီးတွေကို ဆယ်ထားပြီး အဲဒါကို စားသောက်ပြီး အသက်ဆက်ခဲ့ရတယ်တဲ့။
ပင်လယ်ပိုင်းဆိုတော့ အုန်းသီးပေါလို့သာ တော်တော့တယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1601
သူကြီး says: ဒီလိုဆိုတော့ အရက်ရဲ့အကျိုးကလည်း ဘယ်ဆိုးလို့လဲဗျ ကိုခင်ခရ။
နျူးကလိယား ဗုံးသာကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အရက်သမားတွေ စစ်တပ်ထဲဝင် အရက်များများသောက်ထားသူ ရာထူးကြီးကြီးရ တန်ဖိုးရှိသော အရက်သမားများ ဆိုပီးဖြစ်လာမှာ။ ဒဂယ်တော့ လောကကြီးဟာ အရာရာတိုင်း အကောင်းအဆိုးဒွန်တွဲ နေတာပါပဲ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 27
လင်းဇော် ထက် says:ုအုန်းသီး ဟုတ်လား မပြောပါနဲ့ဗျာ တနယ်သားမို့ အားပေးလိုက်ရတာ ခုနောက်ပိုင်း ပေါတောတောကားတွေ ရိုက်လာပီ။
ဗျာ ….လူအုန်းသီးဟုတ်ဘူးလား အော် အဲ့အုန်းသီးထက် ရေဒီယိုဓါတ်အဆိပ်သင့်တာပျောက်တဲ့ ရှက်ကီရာ လေးပိုကြိုက်တာပ။
ခင်ခ says: မောင် သူကြီး ကြည့်လည်းသောက်အုံး နျုးကလီယား မကာကွယ်ခင် အများလွန်လို့ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေအုံးမယ်နော်။ တန်ဆေး လွန်ဘေးပေါ့ဗျာ။
လင်ဇော်ထက်ရေ အိပ်ချင်မူးတူးလား မူးကြောင်ကြောင် ဖတ်မိတာလားကွယ်။
Ma Ei says: အုန်းသီး ကိုတော့ မုန့်တွေထဲဖြစ်ဖြစ်
သူ့ချည်းဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုစားစား အကြိုက်…
အုန်းရည် လဲ ကြိုက်၊သချီထွေးလဲကြိုက်ပါပဲ…
အုန်းရည်က အအေးစာ၊ အုန်းသီးဖတ်က အပူစာတဲ့
ခုတော့ အသက်ရလာတာနဲ့အတူ သွေးတိုးတတ်လာလို့
ဦးဦးပါလေရာ says: အော်…
အရက်ဟာ ရေဒီယိုဓါတ်ရောင်ချည်သင့်တာကို ကာကွယ်ခုခံပေးတာကိုး…
ကို၇ီးယားလူမျိုးချင်းတူပြီး တောင်ကိုရီးယားက ကျား+မ အားလုံး အရက် အပြဲအကွဲသောက်ကြပြီး
မြောက်ကိုရီးယားကလူတွေ အရက်သိပ်မသောက်ကြတာ ဒါ့ကြောင့်ဖြစ်မယ်ဗျ…။
တောင်ကိုရီးယာကလူတွေက မြောက်ကိုရီးယာက အနုမြူဗုံးနဲ့တိုက်ရင် တတ်နိုင်သမျှအကာအကွယ်ရအောင် အရက်လှိမ့်သောက်ကြတာဖြစ်မယ်….
မြောက်ကို၇ီးယားကလူတွေကတော့ တောင်ကိုရီးယားဘက်က အနုမြူဗုံးလုံးဝမသုံးမှာသေချာတဲ့အပြင်- သူတို့စစ်တပ်တွေဝင်လာရင် အလုပ်လျှောက်ရလွယ်အောင် အရက်သိပ်မသောက်တာဖြစ်မယ်….
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: “Who am I ?” ဆိုဒဲ့ ဂျက်ကီချန်း ဇာတ်ကားနဲ့
အုန်းဒီး အသုံးဝင်ဘုံကို ဖတ်ကျိလိုက်ဒေါ့
ကွက်တိ ဒတ်ထိဘဲ ….
အုန်းဒီး အသုံးဝင်ဘုံ ဂဒေါ့ မိုက်ဒယ် …
အုန်းဒီး စားမယ်ဆိုပီး ဘယ်ဒေါ့မှ ပေါဝူးးး
တော်ကျာ .. ဘာ .. “အုန်းဒီး … အီးဒုံး” စားမယ် ဟက်လားဆိုပီး ဖစ်နေအုံးမယ် …
ဟီးးးဟီးးး အားဂျီး ဗဟုသုတ ရဘာဒယ်ဂျို့ ….
ရှဲရှဲ အားဂျီး ဘာဘဲ ဥခင်ခင်ဂျီးရေရို့ ….
nature says: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=541803815841367&set=a.511910935497322.111577.511898985498517&type=1
မောင် ပေ says: ကိုနေချား လဲ ပို့ စ်မှား ပြီ ထင်ပါရဲ့ 
ဟိုဘက်မှာ ဘာသာရေး ငြင်းနေတာနဲ့ နေရာလွဲလာပြီ
အောင်ကြူး says: အုန်းရေ
TNA says: ကိုခင်ခရေ ရွာထဲက ဘာညာ သမဂအဖွဲ့ဝင်တွေတော့ စိတ်ဆိုးကုန်အုံးမယ်။ အရက်ကောင်းကြောင်းပြောလို့။ သူတို့က အရက်ဆို နဲနဲမှမထိဘူးရယ်။ သူတို့ကို မြူဆွယ်သလိုဖစ်နေလေဒေါ့ စိတ်ဆိုးနေတယ်ထင်ပါ့။ အုန်းစိမ်းရေကတော့ ကြိုက်လွန်းလို့ ခဏခဏကျောက်ကျောထိုးစားဖြစ်တယ်။
KZ says: အုန်းသီးဆံ
အုန်းနို့ (မုန့် မျိုးစုံ)
အကုန်ကြိုက်တာမို့ ဒီ ပို့(စ) လေးကို ချစ်ခိုင်စွာဖတ်သွားပါကြောင်း။